Iincwadi eziGqwesileyo zikaHaruki Murakami | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Ababhali, Iintlobo, Iincwadi, Inoveli
Unyana wabathandi ababini boncwadi, uHaruki Murakami (Kyoto, 1949) kunokwenzeka Umbhali waseJapan odumileyo ngaphaya kweelwandle. Echaphazeleke kubomi bakhe bonke bubugcisa nenkcubeko yaseNtshona, isizathu esimenza ahluke kwabanye ababhali baseJapan kwaye simgwebele ukugxekwa okungaphezulu kwesinye sisangqa senkcubeko yelizwe lakhe, uMurakami uhamba ngemisebenzi enokubakho. Yahlulwe phakathi kwenyani kunye nefantasy, ukuqokelela inkolelo yokuba kwenzeka zonke izinto kunye neziganeko zenza isiphelo esinye. Ezi Iincwadi ezilungileyo zikaHaruki Murakami Basinceda ukuba sizibhaptize kwilizwe lomgqatswa ongunaphakade kwiNobel Prize kuncwadi abathi kulo nyaka bapapashe inoveli yakhe entsha eSpain, Bulala umphathi.
1 Kafka elunxwemeni
3 Iimpawu zeTokyo
4 Ingxelo yentaka ejikeleza umhlaba
5 Isiphelo sehlabathi kunye nomhlaba ongenazimangaliso
6 Sputnik, sithandwa sam
7 Umazantsi womda, entshona ilanga
8 Iminyaka yokuhamba kwenkwenkwe ngaphandle kombala
Igama "Eyona Ncwadi yonyaka ka-2005" ebhalwe yiThe New York Times, Kafka elunxwemeni iqwalaselwa ngabaninzi njenge Eyona ncwadi ibalaseleyo kaHaruki Murakami. Kuwo onke amaphepha omsebenzi, amabali amabini anqamleza, esiya phambili nasemva: yinkwenkwe uKafka Tamura, igama alifumanayo xa eshiya ikhaya losapho eliphawulwe ngokungabikho kukanina nodadewabo, kunye noSatoru Nakata, ixhego owathi emva kwengozi eyonzakeleyo ebuntwaneni, wakhula ekwazi ukwazi ukuthetha neekati. Unikwe intelekelelo njengeminye imisebenzi embalwa yombhali waseJapan, uKafka elunxwemeni yinto emnandi kwizimvo kunye nokubonisa ngokugqibeleleyo kwempembelelo yasentshona nasempuma ethi uMurakami acwangcise ngobuchule obukhulu.
1Q84. Iincwadi 1 kunye 2 (MAXI)
Ipapashwe phakathi kuka-2009 no-2010 ngo imiqulu emithathu eyahlukeneyo, 1Q84 Ikhupha isihloko UGeorge Orwell owaziwayo ngo-1984, endaweni ye-9 ngokubhala kwaseJapan ilingana nonobumba u-Q, zombini iihomophones kwaye zibizwa njenge «kyu». Incwadana isetyenziswe kwihlabathi le-dystopian kwaye kwimiqulu yayo yokuqala yokuqala ifaka phakathi amabali kunye neembono zabalinganiswa bayo ababini: u-Aomame, umqeqeshi we-gymnastics, kunye noTengo, utitshala weemathematika, abahlobo bobuntwaneni kunye namashumi amathathu anesithathu inyani abayibonayo ngokwahlukileyo kwabanye. Ukuzaliswa kweembekiselo ezininzi kubugcisa nenkcubeko yaseNtshona, i-1Q84 yabetha xa thengisa iikopi ezizigidi ngenyanga enye nje.
I-Tokyo blues (isiNorway ...
Kwi 1987, Iimpawu zeTokyo yapapashwa isenza ukuba uMurakami aziwe kwihlabathi liphela. Ibali elilula kodwa elilayishwe ngobunzima obufanayo nabalinganiswa balo kunye nesiqalo salo esenziwa ngexesha lokubaleka apho umlinganiswa ophambili, uToru Watanabe, isigqeba esineminyaka engama-37, emamele ingoma yeBeatles, Umthi waseNorway, ekubuyisela emva ebusheni. Ithuba apho wadibana noNaoko ongazinzanga, intombi yomhlobo wakhe osenyongweni uKizudi othuleyo wayelingana nayo yonke imvula eyayina ebusweni bomhlaba. Ulwalamano olusulungekileyo lwaseMpuma olushukunyiswa zizingqi zasentshona.
Ingxelo yentaka ejikeleza umhlaba
Inkcazo yentaka ...
Enye yeenoveli zikaMurakami ezinyibilika kakhulu iikhonsepthi zobunyani kunye nokuzithemba yapapashwa eJapan ngo-1994 nonyaka kamva kwihlabathi liphela. Ibali eliza emva kwesigqibo sikaToru Okada sokushiya ifemu yomthetho apho asebenza khona, ngelo xesha wafumana umnxeba ovela kumfazi ongaqondakaliyo. Ukusukela ngoko ukuya phambili, ibala eliluhlaza livela ebusweni bomntu ophambili, ephawula unxibelelwano kunye nobukhulu obuqala ukukhukula ubomi bakhe. Omnye wabalinganiswa abangaqhelekanga ovusa uninzi lweempikiswano ezingasonjululwanga uTooru azirhuqele iminyaka.
Ngaba ungathanda ukufunda Ingxelo yentaka ejikeleza umhlaba?
Isiphelo sehlabathi kunye nomhlaba ongenazimangaliso
Ukuphela kwehlabathi kunye ...
Nangona iya kuba yenye ye-Murakami classic ngokuhamba kwexesha, Isiphelo sehlabathi kunye nomhlaba ongenazimangaliso yahlala iminyaka njengonqabileyo isiseko sayo esenza ukuba ibe yenye yeeflegi zombhali ezisebenzayo. Yahlulwe yangamazwe amabini kunye namabali afanayo, le ncwadi yapapashwa ngo-1985 ibekwe kwisixeko esineendonga esimele "ukuphela kwehlabathi" esibonwa ngamehlo ophambili ongenasithunzi, nekamva leTokyo, okanye islandland eqalekisiweyo, apho isazinzulu sekhompyuter sisebenzela iziko eliphethe ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni. IDystopia ingekude kangako kwinyani yethu.
Sputnik, sithandwa sam
ISputnik uthando lwam (MAXI)
Kuyamangalisa kwaye kubuhlungu, Sputnik, sithandwa sam ngekhe ibe noluhlu oluphefumlelweyo olufana nelahlekileyo. Umdlalo weqonga othethwe ngutitshala wesikolo samabanga aphantsi ogama lingu-K, onomhlobo osenyongweni kwaye otyumkileyo uSumire, ngumntu onomdla wenoveli oqala uhambo kunye nebhinqa elineminyaka elishumi elinesithandathu ubudala, uMiû. Emva kwekhefu kwisiqithi saseGrisi, uSumire uyanyamalala, yiyo loo nto uMiû enxibelelana noK engazi ukuba, mhlawumbi, ukunyamalala komfazi oselula kungenxa yezizathu zemvelo, ukuqiniseka kokudibana nomnye umda angenakubuyela kuwo. .
Umazantsi womda, entshona ilanga
Enye yeencwadi zam endizithandayo zikaMurakami yenye yezona zisondeleyo kumbhali. Unikwe ikamva elikhethekileyo kunye nobuntununtunu, le noveli ithatha isihloko sayo kwingoma kaNat King Cole isazisa ngeHajime, indoda etshatileyo eneentombi ezimbini kunye nomnini webar ye-jazz ephumeleleyo nobomi babo butshintshe ngokupheleleyo emva kokubonakala. umhlobo wobuntwana awamncama ngenxa yokulahleka kwaye ngubani oyinkanyamba ebomini bakhe, eshushu njengoko intshabalalo.
Sukuyeka ukufunda Umazantsi womda, entshona ilanga.
Iminyaka yokuhamba kwenkwenkwe ngaphandle kombala
Ishicilelwe ngo-2013, le noveli iba «zakudala murakami»Ngokubalisa ibali likaTsukuru Tazaki, injineli kaloliwe othi, ngokungathandabuzekiyo, abajonge nje. Ubomi obunobulolo, ubomi balo mntu uphambili oneminyaka engama-36 uyatshintsha xa edibana noSara, umlinganiswa omkhumbuza isahluko ebomini bakhe esenzeka kwiminyaka eli-16 eyadlulayo: umzuzu xa iqela labahlobo bakhe layeka ukuthetha kuye kwaye ngaphandle kwesizathu.
Ngaba ungathanda ukufunda Iminyaka yokuhamba kwenkwenkwe ngaphandle kombala?
Zithini, ngokoluvo lwakho, Iincwadi ezilungileyo zikaHaruki Murakami?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Iincwadi ezilungileyo zikaHaruki Murakami
USamantha karla sitsho
Aaah ewe murakami. Umntu oxhaphaza abantwana ngokwesini oxubanisa bonke abantu ababhinqileyo kwi «» »works» »» yakhe umntu oxhaphaza abantwana ngokwesondo. Ngokuqinisekileyo. Masibone eyona nto ayenzayo xd
Phendula uSamantha karla
Iincwadi zemibongo ezibalaseleyo
UMacbeth kaShakespeare. Indaleko kubuhlobo bukaBanquo noMacbeth